Wasiir katirsan Hiirshabeele oo booqday Tuulooyin uu sameyeey fatahada wabiga shabeele – Radio Daljir
Maajo 8, 2018 5:03 g 0
Wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dowlahdaha Hoose ee Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle oo ay wehliyeen Mas’uuliyiinta Gobolka oo uu kamid yahay Gudoomiyaha Shabeelaha Dhexe ayaa tagay Tuulooyin ay go’doomiyeen fatahaadda Wabiga uu ku sameeyay.
Waxa ay raaceen Doomo ay dadka u adeegsadaan si ay isaga kala gooshaan Tuulooyinka biyaha Wabiga ka fatahay ay jareen isku socodkii Gaadiidka iyo kii Lugta ahaa.
Tuulooyinka Maandheere, Raqaay, Beyxaay, Nuukay, Halgan iyo kuwo kale ayay tageen, iyagoona la kulmay qaar kamid ah dadka halkaa ku dhibaateysan.
Waxa ay Dowladda iyo Hay’adaha Safamalka ugu dalbeen in gurmad Deg deg ah ay gaarsiiyaan Shacabka ay soo arkeen qaarkood oo Xaalad Nolol oo liidato kunool.
Qaar kamid ah Dadkii hadlay ayaa sheegay in Dhibaatada ugu weyn ay tahay in aanan heysan Cunto iyo Waxyaabaha aas-aaska u ah nolosha Guriga.